Wiil dhowr & toban jir ah oo guursaday haweenay 70 sano ka wayn - BBC News Somali
Wiil dhowr & toban jir ah oo guursaday haweenay 70 sano ka wayn
Image caption Lamaanaha ayaa ku hanjabay in ay is dilayaan haddii aan la aqbalin guurkooda.
Wiil dhowr iyo toban sano jir ah oo u dhashay wadanka Indonesia ayaa guursaday haweenay ku jirta da'a todobaatameeyo, taasi oo ah mid ka horimaanaysa dhaqanka iyo qaannuunka. Xaaladdan ayaa soo shaacday ka dib markii muuqaal laga duubay arooskan la soo galiyey baraha bulshada.
16-ka jirka caruuska ah caaddiyan waa qof da'a yar , laakiin saraakiisha tuulada ayaa siiyey fasaxa "guurkan aan la diiwaan galin" ka gadaal markii lamaanuhu ay ku hanjabeen inay isdilayaan hadii aan la aqbalin guurkooda.
Cik Ani, maamulaha tuulada ay ku nool yihiin lamaanahan oo dhacda Koonfurta Sumatra ayaa u sheegay wakaalada wararka ee AFP "in maaddaaama wiilka da'diisu ay yar tahay ay go'aansadeen in arooska ay ka dhigaan mid khaas ah".
Wuxuu xusay in arooska oo dhacay 2-dii bishan July ujeedkiisu ahaa "in laga dheeraado macsi" ka dhex dhacda wiilka oo magaciisa lagu sheegay Selamat, iyo haweenayda uu guursaday oo lagu magacaabo Roxaya oo da'deeda la aaminsan yahay inay u dhaxayso 71 ilaa 75 sani jir. Wiilka Aabihiis ayaa la sheegay in uu geeriyooday sanooyin ka hor, iyadoo Hooyadiisna ay mar kale guursatay.
'Xaalad dhif iyo nadir ah'
Yenni Izzi, oo ah olalleeye ka tirsan xarunta xasaradaha haweenka ee deegaanka Palembang ayaa u dhaqdhaaqa cirib tirka guurka caruurta, ayaa BBC u sheegay in guurkaasi uu yahay "Xaalad dhif iyo naadir ah".
"Wiilku wuxuu go'aansaday guurka sabab dhaqaale iyo sharuudo jir ahaan aanay ku jirin, balse wuxuu u doortay iyadoo haweenaydu ay siisay daryeel iyo jacayl" ayuu sharaxay.
"Wali wiilku ma ahan qof isku filan illaa iyo xad, marka in uu helo dareenkaas iyo jacaylkaas wuxuu filayaa in wada noolashuhu uu yahay jawaabta, wada noolashaahuna waa inay is guursadaan."
Wasiirka arrimaha Bulshada ee Indonesia Khofifah Indar Parawansa ayey ka soo xigtay jariiradda Jakarta Post isagoo leh "Waa mid aan macquul ahayn guurkoodu diin ahaan sababtoo ah caruusku waa ilmo".
Gudoomiyaha gobolka Koonfurta Sumatra Governor Alex Noerdin ayaa u sheegay wargeyska Sriwijaya Post in"tani tahay mid aan caadi ahayn" ayna jirto farqi wayn oo xagga da'da ah.
"Xaaladdo badan gabdhaha ayaa ah kuwa inta badan xilli hore guursada. Laakiin guurkani u dhaxeeya ninkan yar iyo haweenayda duqda ah faahfaahin dheeraad kama bixin karo".